आफ्नै कारण मानिस नसर्ने रोगको सिकार बन्दै
आफ्नै कारण मानिस नसर्ने रोगको सिकार बन्दै स्वस्थ रहन यसो गर्नुस्
विष्णु ढुंगाना काठमाडौं, ५ असार
एक व्यक्तिबाट अर्कोमा नसर्ने रोगलाई नन कम्युनिकेबल रोग अर्थात् नसर्ने रोग भनिन्छ । यो अस्वाभाविक जीवनशैलीका कारण लाग्ने भएका कारण यसलाई लाइफस्टाइल डिजिज पनि भनिन्छ । कुनै समय सरुवा रोगको खानी नै मानिएको एसिया पछिल्लो समय नसर्ने रोगबाट प्रताडित छ । नसर्ने रोगमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात, क्यान्सरलगायतका रोग पर्छन् । जसको प्रकोप पछिल्लो समय नेपालमा निकै बढेको छ । समयको परिवर्तनसँगै नेपालीको जीवनशैली पनि सहज हुँदै गएको छ । तर, सुखी जीवनशैली अपनाउने क्रममा मानिसले प्राणघातक नसर्ने रोग पनि पाल्दै छन् ।
विश्वमा बर्सेनि नसर्ने रोगका कारण ५ करोड ७० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकले देखाउँछ । यो भनेको कुल मृत्यु संख्याको ६३ प्रतिशत बराबर हो । नेपालमा पनि नसर्ने रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या उत्तिकै छ । नेपालमा हुने कुल मृत्युको ५१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगकै कारणले हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययनले देखाउँछ । संगठनका अनुसार नेपालमा दुर्घटना तथा चोटपटकबाट ७ प्रतिशत, सरुवा रोग, कुपोषण, मातृ तथा बाल मृत्यु दरसमेत हिसाब गर्दा ४२ र नसर्ने रोगबाट ५१ प्रतिशत मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
जसमा मुटु रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट २५ प्रतिशत, क्यान्सरबाट ११ प्रतिशत, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट ५ प्रतिशत, मधुमेहबाट २ प्रतिशत बाँकी ८ प्रतिशत र बाँकी अन्य नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । यही गतिमा नसर्ने रोग फैलिँदै जाने हो भने सन् २०२० सम्ममा यसले महामारीको रूप लिने र हरेक परिवारको एक सदस्य यसको सिकार हुने देखिन्छ ।
नेपालमा नसर्ने रोग महामारीकै रुपमा रहनुको मुख्य कारण परिवर्तित जीवनशैली रहेको मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंहको बुझाइ छ ।
‘हामीकहाँ रोग लाग्दा मात्र अस्पताल जाने चलन छ । यो बानीलाई सुधार गर्नुपर्छ । पहिले यस्ता रोगहरु विकसित मुलुकमा बढी देखिन्थ्यो । तर, अहिले विकासोन्मुख देशमा पनि बढ्दै गएको छ । र, नेपालमा पनि महामारीको रुपमा देखिएको छ । यसका लागि रक्तचाप बढ्न नदिने, स्वस्थ खानेकुरामा बढी जोड दिने, नियमित कसरत गर्ने, बिरामी हुँदा पनि नहुँदा पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेमा नसर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ ।’
योग विशेषज्ञ डा. राजु अधिकारी पनि नसर्ने रोग एउटा ठूलो समस्या बनेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार जीवनशैलीमा आएको विकृति नै यसको प्रमुख कारण हो । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अत्यधिक व्यस्तता र मानिसको महत्त्वकांक्षी सोचका कारण स्वास्थ्यलाई ध्यान नदिने र आम्दानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा बढी श्रम गर्नुपर्ने तर आराम र व्यायामका लागि समय नमिल्ने हुनाले यस्ता रोग बढ्दै छ । रोग लागेपछि हामी शरीरमा उपचार गर्छौं तर केही रोग यस्ता हुन्छन्, जसको जड मन हुन्छ त्यसैले यसका लागि योग ध्यान निकै आवश्यक पर्छ । जीवनशैली परिवर्तन र खानपानबाट यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ । कुनै साइड इफेक्ट नगर्ने र सजिलो हुने भएकाले योग ध्यान गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएका केही नसर्ने रोग र त्यसबाट बच्न चिकित्सकले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा बर्सेनि २ करोड मानिसको मृत्यु मुटुसम्बन्धी रोगका कारण हुने गरेको छ । मुटुरोगीका संख्यामा नेपाल पनि अग्र पंक्तिमा छ । नेपालमा पनि २५ प्रतिशत अर्थात् ७६ लाख मानिसलाई कुनै न कुनै मुटुसम्बन्धी समस्या छ । र, बर्सेनि ३ हजार ३ सय ३८ जनाको मृत्यु मुटुसम्बन्धी रोगकै कारण हुने गरेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार धूमपान, मद्यपान, चिल्लो–पिरो, भुटेतारेका खानेकुरा आदिका कारण मुटुसम्बन्धी समस्या देखा पर्छ । यसबाट बच्न चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने वा त्याग्ने, सागसब्जी र फलफूलको सेवन बढाउने, चिल्लो, बोसोयुक्त खानेकुरा र जंकफुड नखाने, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, मानसिक तनाव कम गर्ने, तौल तथा पेट बढ्न नदिने, नियमित मुटु परीक्षण गराउनुपर्छ ।
क्यान्सर आफैंमा ठूलो रोग होइन । तर, समयमै पहिचान भएन भने यसले ज्यानैसमेत लिन सक्छ । शरीर वृद्धि विकासको क्रममा कोषिकाहरुको अनियन्त्रित विकास अथवा धेरै कोषको उत्पादन हुँदा आउने समस्या क्यान्सर हो । हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले राम्ररी काम नगर्दा पनि कोष अनावश्यक रुपमा वृद्धि हुने गर्दछ ।
अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैली, वंशाणु रोग र निकोटिनको प्रयोगले क्यान्सर लाग्न सक्छ । यसका विभिन्न चरण हुन्छन् । समयमै उपचार गर्न सकेमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । निरन्तर खोकी लाग्नु, कोठी बढ्नु, शरीरको कुनै भागमा गिर्खा आउनु, शरीरबाट रगत वा पीप आउनु, लामो समयसम्म घाउ निको नहुनु र तौल घट्नु यसका लक्षण हुन् ।
सबाट बच्न चुरोट, बिँडी, खैनी, सुर्ती, जाँड, रक्सी सेवन नगर्ने, बासी, सडेगलेको र ढुसी परेको खाना नखाने, पोलेर डढेको मासु र अन्य खानेकुरा नखाने, अखाद्य रंग, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिएका खानेकुरा नखाने, धुलोधुवाँ तथा वातावरणीय प्रदूषणबाट जोगिने, महिलाले नियमित रुपमा गर्भाशय परीक्षण गर्ने, व्यायाम गर्ने र अनावश्यक मोटोपन घटाउनुपर्छ ।
जीवनशैलीमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण नेपालमा मधुमेहका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । मधुमेहको प्रमुख कारणमा मोटोपन देखिएको छ । मानिसको परिवर्तित जीवनशैली, नुनिलो, चिल्लो र गुलियोको बढी प्रयोग, खानामा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुनुजस्ता कारणले मोटोपन बढ्ने र मधुमेह हुने गरेको पाइएको छ । धेरै प्यास लाग्ने, पिसाब बढी हुने, भोक बढ्ने, शरीर दुब्लाउने, आँखा धमिलो देखिने, छातीको इन्फेक्सन हुने, छालामा पिलो आइराख्ने र हातखुट्टा झमझमाउने जस्ता यसका लक्षण हुन् । नियमित व्यायाममार्फत मोटोपन घटाउने, चिल्लो, नुनिलो र गुलियो सेवन कम गर्ने र तनाव कम लिने गरेमा यसबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
हाल विश्वका १ अर्ब मानिस यसबाट पीडित छन् । उच्च रक्तचापका कारण बर्सेनि ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । हृदयाघात र मस्तिष्कघातको प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप नै हो । साथै उच्च रक्तचापले मुटुरोग, मिर्गाैला रोग र मधुमेहसमेत बढाउँछ । सामान्यतया उमेर बढ्दै जाँदा रक्तनलीमा आउने संरचनागत परिवर्तनले रक्तचाप बढ्छ ।
उच्च रक्तचाप भएका बाआमाबाट जन्मिएको बच्चामा पछि उच्च रक्तचाप बढ्ने सम्भावना ४५ प्रतिशत रहन्छ । रातो मासु, गालेको अचार, बोतलमा राखिएको दूध, सुकुटी, फास्ट फुड, मदिरा, नुन आदिको सेवनबाट उच्च रक्तचाप हुन्छ । चिकित्सकको सुझावअनुसार नियमित चेकअप गर्ने, फलफूल र सागपातको पर्याप्त सेवन गर्ने, मदिराजन्य पदार्थ र धूमपान नगर्ने, शरीरलाई आवश्यकताभन्दा बढी क्यालोरी सेवन नगर्ने जस्ता विधि अपनाएमा यसबाट बच्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ६, २०७६, ०४:४५:००